kiratisaathi.com - धरान, ६ जेठ आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले निकालेको मसाल जुलुस
धरान, ६ जेठ आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले निकालेको मसाल जुलुस
Posted on May. 20th
1 responses to ( धरान, ६ जेठ आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले निकालेको मसाल जुलुस )
May. 20th 10:40 PM धरान, ६ जेठ आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले निकालेको मसाल जुलुस २ राउण्ड गोली चल्यो (भिडियोसहित)
May 19, 2012 एचकेनेपाल डट कम-
धरान, ६ जेठ । बन्दको पूर्वसन्ध्यामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले निकालेको मसाल जुलुसमा शनिवार साँझ प्रहरीले १५ सेल अश्रुग्यास तथा २ राउण्ड हवाइ फायर गरेको छ। समितिले निकालेको मसाल जुलुसलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गर्ने क्रममा एचकेनेपाल डट कमका प्रतिनिधीसहित एक दर्जन घाइते भएका छन्।
घाइते हुनेहरुमा एचके नेपाल डट कमका प्रतिनिधी सन्तोष काफ्ले, जनजातिका तर्फबाट देवाहाङ राई, सुदर्शन श्रेष्ठ र सुदर्शन थापा मगरलगायत रहेका छन्। प्रहरीतर्फ सई सुमन न्यौपाने, असई शिवनारायण यादव, प्र.ह. दिवस खतिवडा, प्र.ज.मणिराम प्रधान र निरज सिंह र प्रह प्रकाश तामाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मकालुकर्मी प्रहरीले हानेको अश्रुग्याँस तथा ढुंगा लागेर सामान्य घाइते भएका हुन् भने प्रहरी तथा अन्य सामान्य घाइते भएका छन्। भोलिको बन्दलाई सफल बनाउने उद्धेश्यले धरान १२ चतरालाइनबाट निकालेको मसाल जुलुसलाई प्रहरी कलेज रोड अगाडि अवरोध गरेको थियो। प्रहरीको अवरोधका वावजुत पनि आन्दोलनकारीले मसाल भानुचोकसम्म ल्याएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि दुवैतर्फ झडप सुरु भएको थियो। मसाल ल्याउने युवाबाट मसाल खोसेपछि स्थिति सामान्य वन्दै गएको अवस्थामा एक प्रहरीले जनजातिका कार्यकर्तालाई लक्षित गरि ढुंगा मुढा प्रहार गरेपछि धरानको भानु चौक तवानग्रस्त भएको थियो। तनाव सुरु भएपछि प्रहरीले १५ सेल अश्रुग्यास तथा २ राउण्ड हवाइ फायर गरेको थियो।
पहिचानसहितको जातीय संघीय राज्य हुनुपर्ने, आदिवासी जनजातिलाईलाई पनि समान अधिकार दिनुपर्ने, विगतमा भएका सरकार र आदिवासी जनजातिबीच भएको २० बुदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माग राखी भोलिबाट तीन दिन बन्दको आवहान गरेको वन्द सफल गराउन शनिवार मसाल प्रदर्शन गरेको हो। Comment
Uploaded by Jitman Description: धरान, ६ जेठ आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले निकालेको मसाल जुलुस In Category: Others
Interview with Bijay subba about Federalism, Consitution, Equality and Rights of Janjati ( HimalayaTelevision) Kumar Lingden - Limbuwan Picnic in Thankot, Kathamandu By Limbuwan Valley Committee Interview with Leader Ashok Rai in Adhibasi Janjati Rights and Liberation Limbuwan Struggle Kumar Lingden President Limbuwan, Limbuwan Mass Meeting, Part-2, Damak 12 May 2012 Limbuwan Struggle, Kumar Lingden, President, Limbuwan Mass Meeting at Damak, 12 May 2012, Part I Limbuwan Struggle Coordinator Bijaya Subba addressing Mass Meeting at Damak, 12 May 2012, Part II Limbuwan Struggle Coordinator Bijaya Subba addressing Mass Meeting at Damak on 12 May 2012 Part I Limbuwan Ranke Julus in Birtamode Jhapa, Nepal (Limbuwan tourch Rally) Interview with Aankaji Sherpa Part2(जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पासँग) Interview with Aankaji Sherpa Part 1 (जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पासँग) More in same category